Employee Reward and Recognition ﻿
ဝန်ထမ်းများကို ဆုချခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း
ချောကလက် (သို့မဟုတ်) ခွက်ကိတ်မုန့်တစ်ခုမှ သင့်ရဲ့ကလေးအား အိမ်စာများကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် (သို့မ ဟုတ်) သူတို့ရဲ့အခန်းအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်စေရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်စေဖို့ အရေးပါမှုရှိ၊ မရှိကို သင့်ကိုယ်သင် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ထို့နည်းတူစွာပင် ဆုချခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ဟာ သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို အထူးတလည် စွမ်းဆောင်နိင်စေရန်အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလာစေရန်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်မြဲမြံခြင်း စသည့်အကျိုးရလာဒ်များကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းများကို အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အကျိုးရှိစေတဲ့အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေတဲ့အတွက် ထိုအရာများကိုအထင်သေး၍မရနိုင်ပါဘူး။
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်ပါရမီရှိသူများကို ဘယ်သူက ဌားရမ်းမှုမပြုပဲနေချင်ပါ့မလဲ? ဒါဆိူရင် ဝန်ထမ်းများကို စိတ်အားထက်သန်လာစေရန်နှင့် သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်လာစေရန်အတွက် နည်း လမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေမွေးမြူခြင်းကို ဘာလို့များမလုပ်ဆောင်တာပါလဲ? အဆုံးတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ဟာ သူတို့တွင်ရှိနေသောလူသားအရင်းအမြစ်များရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုး ရှင်းသောဒဿနတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ သူတို့အားပျော်ရွှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ကသင့်ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းအား အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများကိုဆုချခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနည်းစနစ်ဟာ လူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ် သည်သာမက ထိုကဲ့သို့ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာ ထိုသူတို့အားသင့်အတွက်လုပ်ငန်းများဆောင်ယူလာ စေဖို့ရာအတွက်တိုက်တွန်းမှုပြုနိုင်စေရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ၏လိုအပ်ချက်များအားဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ငွေကြေး ဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာမပါတဲ့ဆုချခြင်းမျိုးတွေဟာ သင့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် လက်တွဲဖော် ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေမည့် ကောင်းမွန်မှန်ကန်သောအလုပ်သမားအင်အားတစ်ရပ်ကို ကူညီတည်ဆောက်ပေးနိုင် မှာဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုပမ်းအားထုတ်မှုများအား အသိအမှတ်ပြုပြီး စိတ်ဓါတ်အင်အားကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၏ အကျိုး ရလဒ်အနေနဲ့ ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် ပင်ပန်းမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကိုလျော့နည်းသွားစေမှုတို့ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာ က စိတ်အားထက်သန်ပြီး သစ္စာရှိသောအလုပ်သမားအင်အားတစ်ရပ်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ကံကြမ္မာ ကိုပြောင်းလဲပေးစေနိုင် သည်ကိုသက်သေပြုနေသောအချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးတွင် လူသားတို့၏ ကြိုးစားအား ထုတ်မှုများသည်သာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အတွက် အကြီးမားဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနေသည့်အချက် ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များကို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှစီမံခန့်ခွဲသူတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်း နှင့်ရရှိနိုင်ဖို့မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။ သူတို့ရဲ့အကြံအစည်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်မှာ အလုပ်သမားများသာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာမဟုတ်သည့်ရည်မှန်းချက်များကို လည်း ရရှိအောင်မြင်စေရန်အတွက် အကူအညီပေးနေသည်မှာ အလုပ်သမားများသာဖြစ်ပါသည်။
ဆုချသည့်စနစ်တစ်ခုအားတည်ထောင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် များကို သေချာစွာလေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြု မည်ဆိုသည်နှင့် သူတို့အား ဘာတွေအထောက်အပံ့ပြုလုပ်ရမည်ဆိုသည်တို့ကို ဆုံးဖြတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်တာဝန်တစ်ခု၏ တာဝန်ယူရမှုများနှင့် စွန့်စားရမှုများကို စေ့စပ်သေချာစွာလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏ ဆုချသည့်စနစ်ဟာ ထိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အမြင်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိနေစေဖို့ရာ လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အပေါ်တွင်မူတည်၍ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မဟုတ်သောဆုချမှုများသည် ဝန်ထမ်းများကို ထိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပေါ်တွင် ပိုမို၍ပါဝင်ကူညီပေးဆပ်လာကြစေရန် အတွက် တိုက်တွန်းအားပေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆုချခြင်းများ - လစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အပိုဆောင်းထောက်ပံ့ငွေများ၊ ရုပ်ရှင်လက်မှတ် များ၊ အနားယူအပန်းဖြေခရီးများ၊ အထူးအခြေအနေများတွင် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုများ၊ ထုတ်ယူ အသုံးပြုနိုင်သောကူပွန်လက်မှတ်များ၊ ဆုကြေးငွေများ၊ လက်ဆောင်ထုတ်ယူနိုင်သောလက်မှတ်များ၊ စတော့ရှယ် ယာများကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်းများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအားလုံး၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခများကိုအခမဲ့ သို့မဟုတ် သက်သာစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကလေးများအတွက် ကျောင်း/ ကျူရှင်စရိတ်များတို့သည် ထို အရာများတွင်ပါဝင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့မူဝါဒများကို ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆုချခြင်းများအတွက်အစီအစဉ်ချ မှတ်မှုပြုရာတွင် စီမံခန့်ခွဲသူတို့ဟာ တတ်နိုင်သမျှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနိုင်စေရန် သေချာစွာပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် တိကျသေချာသောစီမံမှုနှင့် ထိရောက်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့ရှိရမည်ဖြစ် ပါသည်။
ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆုချမှုများ - ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆုချမှုများတွင် ဆုဖလား များ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အတူညစာစားခြင်းများ၊ ဝန်ထမ်း၏နေထိုင်ရာအဆောက်အအုံ အား ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်းများ၊ စိတ်အပန်းဖြေမှုပြုလုပ်နိုင်သည့်ကလပ်များသို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ထည့်သွင်းပေး ခြင်းများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ ကုမ္ပဏီ၏အသုံးအဆောင်များအားအသုံးပြုစေခြင်းများ၊ အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက် ပေးနိုင်သည့်အခါတွင်ဆုချခြင်းများ၊ လည်စည်းရင်ထိုးများ၊ ရင်ထိုးများ၊ ဒိုင်ယာရီများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာသို့ အလုပ်ရာထူးတိုးပေးမှု အစရှိသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာနှင့် ငွေရေးကြေးရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆုချခြင်းများကိုပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများအား အစဉ်မပြတ်စွမ်းဆောင်မှုကောင်းများပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်တွန်းအားပေးနိုင်ပါသည်။ သင့် တော်ပြီး ထိရောက်သော ဝန်ထမ်းများကိုဆုပေးမှုပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုအစီအစဉ်များဟာ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ဝန်ထမ်းတို့အကြား သင့်မြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။